ရွှေမန္တလေး၊ အထက်မြန်မာ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ကဒီလိုဆိုပါလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွှေမန္တလေး၊ အထက်မြန်မာ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ကဒီလိုဆိုပါလား
ရွှေမန္တလေး၊ အထက်မြန်မာ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ကဒီလိုဆိုပါလား
Posted by piti on Jul 11, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ဟုတ်လားတော့ မသိပါဘူးဗျာ အင်တာနက်ပေါ်တာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ
အစည်းအဝေးမှာ နာယက ဆရာဦးညီစေမင်းရဲ့ သြ၀ါဒစကားမှာပဲ “ ကျွန်တော့်စာမူခတွေထဲက စာပေလူမှုရေးအစီအစဉ်ကို ငွေကျပ် တစ်သိန်းခွဲ လှူခဲ့တယ်။ စာရင်းရှင်းတမ်းမှာ မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ “ ဆိုပြီး ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ငွေတွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘုံးတာတော့ မကောင်းဘူးလေ..
မကောင်းမှန်းသိလျက်နဲ့ဘာကြောင့် မကန့် ကွက်ကြသတုန်း..
ကျန်တဲ့စာရေးစရာတွေကလဲ နေရာမပေးပဲ ဘာကြောင့် နေရာတက်ယူနေကြသတုံး..
ဒင်းတို့ တွေစာအုပ်ထဲမှာတစ်မျိုး..အပြင်မှာ သခိုးတွေလား..အရှက်မရှိကြလို့ လား.
ခုလို အင်တာနက်မှာ တင်ပြတာကလဲ ဘာသဘောလဲ..
စေတနာနဲ့ လား အဝေမတည့်လို့ လား….
ဘသူ့ မှ မယုံတာပဲ အေးတယ်..
တင်တဲ့ post က မှန်တယ် ဆိုရင် အကျိုးရှိပါတယ် ..
နောက်ဆက်တွဲကို မျှော်နေမယ် .. (ဆက်မရေးရင်တော့ ပီတိကို တရားစွဲမယ်)
လျှပ်တပြက် က ဆိုတော့ နဲနဲစောင့်နားထောင်ပြီးမှပဲ ယုံပါတော့မယ်။
ယုံလိုက်ပါ ကိုxman ၊ လျှပ်တစ်ပြက် နဲ့ ရွှေမန်းတလေး တို့ ရဲ့ ညောင်မြစ်အပြန်အလှန်တူး မယ့် ဇါတ်ကြီးလည်း လာဦးမှာပါ ။
အသေးစိတ်ကတော့ ကျနော်လဲ မသိဘူးဗျ။
ကျွန်မတို့လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာနာမည်တွေပါပါနေတော့ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။
စာတွေလေးစားရရင် လူလည်းလေးစားစရာလို့ ထင်မိတာဘဲ။
D အသင်းက လူတွေဦးဆောင်နေမှတော့ ဒါမျိုးတွေပဲပေါ့။
လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာနာမည်တွေပါပါနေတော့ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။
လျှပ်တပြက်က အစိုးရရဲ့လူကို ဘယ်တော့မှ မထိဘူး ..
သူနဲ့ မတည့်တဲ့လူ ပါမှ ထိတာ .. လူပါး
ရန်ရှင်းကို ပြောပြချင်တယ် .. စာကို ဖတ်လို့ ကြိုက်ရင် လူကို မကြည့်နဲ့တဲ့ .. တခါတလေ စာနဲ့လူ သိပ် ကိုက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး ..
တချို့က ဆိုတယ် .. စာက သူ မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကို .. မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟာကို .. လုပ်သယောင် ရေးတာ တဲ့ (စာဦးမှာကတည်းက တချိ့ လို့ ရေးထားပြီးပြီနော် .. ဘယ်လောက် ရာနှုန်းလဲ မသိဘူး)
တချို့ကလဲ လုပ်ချင်လျက်နဲ့ မလုပ်ရတာကို မချင့်မရဲနဲ့ ရေးတာ တဲ့ ..
စာရယ် လူ ရယ် ခွဲလိုက်နော်
သူတို့ ဆင်စိမ်းစားသောက်ဆိုင်မှာဆိုလား အိုရီယမ်တယ်ဟောက်စ် မှာ ဆိုလား အစည်းအဝေးလုပ်ရင်း မကြေမနပ်ဖြစ်ကြတယ်လို့တော့ ကြားမိသလိုပါပဲ…
အဲဒါကြောင့် မြန်မာကီဝီလိခ် မှာ ဒါလေးကိုတွေ့လို့ ယူတင်လိုက်မိတာပါ…
သိတဲ့သူတွေ အသေးစိတ် ပြောပြရင်တော့ ကျေးဇူးနော်….
တစ်ခါတုန်းကလည်း မြို့သစ်ဘက်က မီးလောင်တဲ့သတင်းမှာ ရွှေမန္တလေးဂျာနယ်က စတင်လောင်တဲ့နေရာ မှားယွင်းဖော်ပြမိလို့ မဆိုင်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကတစ်ယောက် ၆ လလောက် အဖမ်းခံခဲ့ရဖူးသေးတယ်ဆိုပါတယ်။ နောက်မှ မှားယွင်းသွားလို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် နစ်နာတဲ့ အနေနဲ့ တရားစွဲတော့ ဆရာသိုက်ထွန်းသက်က လျှပ်တပြက်က ဦးမြက်ခိုင်ကို ခြေသလုံးဖတ်တောင်းပန်ပြီး အကူအညီတောင်းလို့ နစ်နာတဲ့သူခမျာ တရားစွဲလျော်ကြေးတောင်းလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းလေးလဲ ကြားမိသေးသလိုပါပဲဗျာ…
ဒါလေးလည်း သိတဲ့သူတွေ နည်းနည်းလောက် ပြောပြကြပါအုံးဗျာ
အခုထိဒီအကျင့်တွေက ရှင်သန်ဆဲပါလားနော် သုနခေါစိတ်ကိုပြောတာ
ပုလင်းပေးမှ သတင်းရေးဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေးလိုပေါ့ဗျာ စတ္ထုထမာန်တိုင်ယိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်နေရင်တော့ .. အင်း ဦးကျော်ဆန်းတို့လက်ခမောင်းခတ်မှာပ